Muxuu Arsene Wenger Ka Yidhi Guushii Weyneyd Ee Ay Gunners Ka Soo Gaadhay Stoke City?, - Wargane News
Home Sports Muxuu Arsene Wenger Ka Yidhi Guushii Weyneyd Ee Ay Gunners Ka Soo...
Muxuu Arsene Wenger Ka Yidhi Guushii Weyneyd Ee Ay Gunners Ka Soo Gaadhay Stoke City?,
Macalinka reer France ee Arsene Wenger ayaa wuxuu qiray in kooxdiisa ay awood buuxda u leedahay gaadhista booska afaraad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, kadib guushii weyneed ay kaga gaadheen dhigooda Stoke City 1-4.
Arsene Wenger ayaa kadib marka uu kulanka soo idlaaday wuxuu u sheegay wargeyska “Express”: “Waxaa nasoo martay usbuuc aad u adag, laakiin waxaan kaga soo gudubnay si wanaagsan, xidiguhu waa kuwa leh hal u jeedo ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka, waana waxaan ku faraxsanahay guushii aan ka gaadhnay Stoke City”.
Tababaraha kooxda Arsenal ayaa wuxuu hadalkiisa intaa kusii daray: “waxaan aamisanahay marka ay kooxda gaadho guul weyn oo sidaan oo kale in kooxda ay ku sugan xidigo wanaagsan isla markaana leh maskax guuleed, laakiin waxaa xaqiiqo ah in marka aad aado Stoke City si aad kula soo ciyaarto garoonkooda waa hubaal in dhibaato xoogan aad kala soo kulmeyso”.
Wenger oo ka hadlayay sababtii uu badalka ugu sameeyay Sanchez ayaa wuxuu yidhi: “dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen inaan ka saaro Sanchez garoonka, laakiin waa xidig inta badan u dagaalama sida uu ugu sugnaan lahaa garoonka, intaas kadib wuxuu la yimid gool”.
In kooxdiisa ay gadhi karto xili ciyaareedka inta ka harsan booska afaraad si ay ugu soo baxdo xili ciyaareedka soo aadan Champions League-ga wuxuu Arsene Wenger jawaab kaga dhigay: “kaliya waa inaan guuleysanaa kulamada inooga harsan xili ciyaareedkan”.
Si kastaba Gunners ayaa sare ugu qaaday dhibcaheeda xili ciyaareedkan horyaalka Premier League 69 dhibcood, waxayna haatan si toos ah u fadhidaa booska 5aad, waxayna hal dhibac haatan u jirtaa Liverpool oo booska 4aad kaga sareysa 1 dhibac uun kaliya, halka Man City oo booska daddexaad ku jirto ay ka hooseeyaan 3 dhibcood.